#Mourinho oo si Kadis ah loogu Arkay Kulankii dhex Marey Sweden & Italy isagoo il gaar ah ku hayey labo ciyaaryahan | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Mourinho oo si Kadis ah loogu Arkay Kulankii dhex Marey Sweden...
#Mourinho oo si Kadis ah loogu Arkay Kulankii dhex Marey Sweden & Italy isagoo il gaar ah ku hayey labo ciyaaryahan
Hogaamiyaha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa Xaadiray kulan ay wada Ciyaarayeen dalalka Sweden iyo Italy waxaana Jose uu halkaasi u tagay si uu u soo daawado Qaab Ciyaareedka Xidiga kooxda RB Leipzig Emil Forsberg.
Emil Forsberg ayaa kamid ahaa Tiro Ciyaartooy ah oo Suuqii la soo dhaafay aad looga doonayay Horyaalka England xidigaasi waxaa aad u loola xiriirinayay kooxaha Liverpool iyo Arsenal laakiin Manchester United ayaa dooneysan xiligan xidigaasi oo Sweden ka soo Jeeda.
Jose Mourinho ayaa Ciyaarta Itlay iyo Sweden wuxuu ka daawanayay Qeybta sare ee Garoonka waxaana la soo sawiray Zlatan Ibrahimovic oo Ciyaarta la daawanayay Jose Mourinho.
DailyMail ayaa Qortay in Jose Mourinho uu damacsanyahay in xidigaasi oo Qadka dhexe ka Ciyaara uu ku soo Biiriyo Old Trafford waxaana uu isha ku hayay Qaab Ciyaareedka xidigaasi inta ay Socotay Ciyaartii Sweden iyo Italy.
Emil Forsberg ayaa xagaagii la soo dhaafay aad ugu Raaxeystay Bandhig wanaagsan wuxuuna Caawinaad ka Geystay 19 Gool oo kooxda RB Leipzig ay ka dhalisay xagaagii hore Bundesliga.
Jose ayaan hada ku Qanacsaneyn shaqada ay Mkhitaryan iyo Juan Mata ka hayaan Qadka dhexe ee Manchester United waxaana la sheegay in xidigaasi uu Mourinho u arko mid xalin Kara dhibaatoyinka Manchester United ka Heysta Qadka dhexe.